Murume angave anokwezva sei kumukadzi | Bezzia
Maria Jose Roldan | 01/06/2021 22:00 | Hukama
Murume anoyevedza haafanire kunge akanaka, asi anogona kunge aine humwe hunhu hunoita kuti hunakidze chikamu chevakadzi. Iri kirasi revarume rinoziva kushandisa mamwe ehunhu hwavo kana zvasvika pakukwanisa kukunda vamwe vakadzi. Chiyero chekukwezva chakakura zvekuti havana matambudziko akawandisa kana zvasvika pakusangana nevakadzi vazhinji.
Munyaya inotevera tinokuudza kuti ndezvipi izvo zvombo izvo varume vazhinji vasina kunyanyisa kutsvinda vanazvo, asi kana ichinyatsokwezva kune vakawanda vakadzi.
2 Iva neuchenjeri
3 Gestural maitiro
Maitiro anoita murume akakosha zvakanyanya kana zvasvika pakuve anokwezva kune mumwe mukadzi. Chimiro chakasimba uye chakachengetedzeka chinoita kuti murume anzwe kuvimba kukuru mumunhu wake kana zvasvika pakukwanisa kutanga hukama nemukadzi. Kuve nekuvapo kukuru mukuwedzera pakufambisa kwakawanda kwekuchengeteka, kunoita kuti nhanho yekukwezva isimuke manhamba mazhinji, zvisinei nekuti murume ari kutaurwa uyu haasi mukati mematanho eanonzi murume akanaka.
Chimwe chinhu chakakosha maererano nesimba rekukwezva kwevarume vazhinji kune vakadzi, inosanganisira kuve nekubata kumwe nehukama huri kutaurwa. Iwe unofanirwa kuve uine imwe nhanho nehungwaru kana uchitaura nemukadzi uye ndezvekuti kuzviita nenjere huru, ndechimwe chinhu icho chikamu chevakadzi chinofarira kufanana zvakanyanya.
Maitiro enyama ndechimwe chinhu chinogona kuita kuti mukadzi awire patsoka dzemumwe murume. Inofanirwa kuitwa nehunyanzvi kwazvo kuti mukadzi anzwe zvakanaka uye akasununguka nekuvapo kwechirume. Zvidzidzo zvakasiyana zvakaratidza izvo gokora nenzvimbo yeruoko zvakakwana kana zvasvika pakusimbisa kumwe kubatana mune imwe hukama.
Zviratidzo chimwe chezvinhu zvakajeka kana zvasvika pakusiyanisa murume anokwezva kubva kune asiri. Kune zvimwe zvimiro zvinoratidzira kushomeka kwekuchengetedzeka uye kuzvivimba, sekuyambuka maoko ako uri pakati pekutaurirana nemukadzi. Panyaya yemurume anokwezva uye anovimba, Kazhinji tarisa mumaziso emumwe munhu pasina kunzvenga kutarisa mune chero mamiriro. Kunze kwekutarisa kunogara kuchikosha, kuziva kuseka kunobatsira kutanga humwe hukama. Unofanira kuziva kunyemwerera panguva yakakodzera. Ichi chinhu icho vakadzi vanowanzo farira zvakanyanya, zvichikonzera mwero wakakosha wekukwezva.
Muchidimbu, kuva akanaka hakuna kukwana kana zvasvika pakukwezva mumwe mukadzi. Kune humwe hunhu hunoita kuti murume anyatsokwezva muzvinhu zvese. Kuva nekutakura uye kuvepo, pamwe nekugona paunobata mukadzi uye kudzivirira kumwe kubata kwemunhu zvinhu zvinoita kuti murume anyanye kukwezva mukadzi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Kuti murume angave anokwezva sei kumukadzi